စင်ကာပူနိုင်ငံမှာကျင်းပမည့် ဘက်စုံသုံး အိမ်ရာစီမံကိန်း The Central Condominium - Myanmar Builders Guide
Marga Landmark မှ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နေသော အဆင်မြင့် ဘက်စုံသုံး အိမ်ရာစီမံကိန်း The Central ကို အထူးအစီအစဉ်နဲ့ပါဝင်ရောင်းချပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
The Central မှာ အဆင့်မြင့် လူနေမှု ဘဝပုံစံ၏ စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ် ခမ်းနားကြီးကျယ်မှုကို ရရှိစေရန်အတွက် ရေကူးကန်၊ ခေတ်မီ အားကစားခန်းမ၊ အချိန်ပြည့် wifi၊ spa နှင့် sauna အစရှိသည့် အကောင်းမွန်ဆုံးသော ဝန်ဆောင်မှုများအား ထည့်သွင်းဆောက်လုပ်ထားပါတယ်။
<< Yoma Bank Home Loan Expo @ Myanmar Plaza အိမ်ရာအရောင်းပြပွဲကြီး>>
ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်းမပေါ်ရှိ The Central ၏ မျက်နှာစာထောင့်တွင်လည်း ရန်ကုန်မြို့၏ ပထမဆုံးသော ဈေးဝယ်လျှောက်လမ်းတွင် ဆိုင်ခန်းတွဲများ၊ စားသောက်ဆိုင်ခန်းများဖွင့်လှစ်ပါရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
The Central Boulevard ဟာ ရန်ကင်းမြို့နယ်ကို ပိုမိုကောင်းမွန်သော လူနေမှုပတ်ဝန်းကျင်အား ဖော်ဆောင်ပေးမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ယခုအခါ The Central Boulevardတွင် စားသောက်ဆိုင်များ၊ ကဖေးဆိုင်များ၊ ဘားများလည်း စတင်ဖွင့်လှစ်လျှက်ရှိပါတယ်။
ပြပွဲတွင်းရရှိမည့်အထူး Promotion တွေကတော့ ပထမဆုံးဝယ်ယူသူများအတွက် အခန်း (၃) ခန်းအား Special Discont ဖြင့် ရောင်းချပေးခြင်း၊ ပြပွဲအတွင်း ၀ယ်ယူပါက Developer နှင့်တိုက်ရိုက် ညှိနှိုင်းငွေချေစနစ်ဖြင့် တိုက်ရိုက်ဝယ်ယူခွင့်ရရှိခြင်း၊ ပြပွဲအတွင်း ၀ယ်ယူပါက အထူး Payment Plan နှင့် အထူး Promotion များပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
<< လူတန်းစေ့အိမ်ရာ ပိုင်ဆိုင်နိုင်ရေး မဆောင်ရွက်နိုင်သေးသည့် အကြောင်းရင်း>>
စီမံကိန်းတည်နေရာ = အမှတ် -၇ ၊ ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်းမ ၊ ရန်ကင်းမြို့နယ်
မြေအကျယ်အဝန်း = ၈.၇ ဧက
The Central Executive Residence (R3)
စတုရန်းပေ 594 မှ 1241 စတုရန်းပေ အကျယ်အဝန်းရှိ 1 Bedroom,2Bedrooms အခန်းအမျိုးအစား (၂) မျိုးရွေးချယ်ဝယ်ယူနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Facilities တွေကတော့ Outdoor swimming pool, Billiards Room, Meeting and Function Rooms, Sauna Facilities, Restaurant, Bar and Café, Children's Playroom, Fully Equipped Gymnasium, Library, Fully Equipped Business Centerတို့ ဖြစ်ပါတယ်။
The Central Prestige (R8)
-Tower 1 စတုရန်းပေ 637 မှ 1486 စတုရန်းပေ အကျယ်အဝန်းရှိ 1 Bedroom,2Bedrooms,3Bedrooms အခန်းအမျိုးအစား (၃) မျိုးကို ရွေးချယ်ဝယ်ယူနိုင်မည်။
-Tower2စတုရန်းပေ 630 မှ 1529 စတုရန်းပေ အကျယ်အဝန်းရှိ 1 Bedroom,2Bedrooms,3Bedrooms အခန်းအမျိုးအစား (၃) မျိုးကို ရွေးချယ်ဝယ်ယူနိုင်မည်။
-Multipurpose Banquet Hall,
-Luxurious Swimming Pool,
-Sky Gym & Spa တို့ဖြစ်ပါတယ်။
. Inya Lake (2Minutes' Walk )
. Myanmar Plaza (2Minutes' Drive )
. Sedona Hotel (3Minutes' Walk )
. International School (3Minutes' Walk )
. Yangon University (9Minute Drive )
. Okkalapa Golf Resort (9Minutes' Drive )
. Aung Yadanar Hospital ( 10 Minutes' Drive )
. Yangon Golf Club ( 17 Minutes' Drive )
. Yangon International Airport ( 20 Minutes' Drive )
အောက်ပါ Link မှာ အခမဲ့စာရင်းသွင်းပြီး တက်ရောက်ဖို့ ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။